Trano ambongadiny fambolena fambolena sy fiompiana trondro PE Winsom
Fambolena trano fitrandrahana solosaina PE mora vidy
> = Vanja 2000
2,900 $ 2,800 $ 2,700 $
Ity fonosana ity dia manana fonony feno mihidy ary afaka mamorona tontolo iainana hafanana sy avo kokoa, izay afaka manampy anao hamboly zavamaniry maro karazana.
1) rafitra tariby nandrisika, harafesina ary tsy harafesina.
2) Sarimihetsika PE mangarahara
Laharana maodely WS-GH1
Seranan-tsambo FOB Shanghai, Ningbo
Anaran-javatra Fambolena trano fitrandrahana solosaina PE mora vidy
Haben'ny vokatra 500 * 60 * 40CM
Fitaovana fonosana Sarimihetsika PE
Frame spec. Dia 2.6 * 0.8mm tariby tariby
Fonosana baoritra Fonosana baoritra mahazatra
MOQ 800 farantsa
Manampy anao hamboly karazan-javamaniry maro karazana izay mety tsy ho an'ny fiarahamonina misy anao amin'ny alàlan'ny tontolo mafana sy mando kokoa izay mampiroborobo ny vanim-potoana mafana sy ny zavamaniry toetrandro. maniry sy mitantana ny zavamaniry mandavantaona ary miaro voankazo, legioma ary voninkazo avy amin'ny singa henjana. Ny famolavolana tionelina dia mahatonga azy io ho milamina sy mora ny mikarakara sy mitantana zavamaniry marobe.
Zaridaina alohan'ny lohataona! Manafana ny tany ity cloche ity ary miaro amin'ny toetr'andro, biby ary bibikely mahery vaika Ny tonelina dia mamorona sakana tanteraka, mitazona hafanana sy hamandoana hitazonana ny zavamaniry ho salama sy falifaly.
Namboarina avy amin'ny polyethylene miasa mavesatra maharitra 150 an'ny UV maharitra maharitra, ity tonelina ity dia matanjaka sy matanjaka. Ireo vy vita amin'ny vy nandrisika dia harafesina ary mora miditra amin'ny tany hiarovana ny tonelina amin'ny toerany.
Miaraka amin'ny volavolainay misy patanty iray ihany, ny Easy Tunnel Cloche dia haingana apetraka ary raisin'olon-tsotra Manokatra ny tionelina toy ny feon-konona fotsiny ny tunnel ary aforeto tsara rehefa avy nampiasaina Ny fidirana ao amin'ny zaridainanao aloha dia rivotra!
Teo aloha: Kitapo hazo krismasy avo lenta fanampiny
Manaraka: 3-tier Walk-in mini trano fandraisam-bahiny trano fonenana sary mihetsika PVC
Trano fonenana plastika
Trano fandraisam-bahiny tokana
Tonelina entona amidy 10'x7′x7 ...
Trano fantsom-boalavo PE fotsy 8x3x2m
Trano maitso tionelina plastika ho an'ny fambolena 6x3x2m